Ashwagandha, chirimwa kuti uve nesimba rebhiza - AFRIKHEPRI
Ashwagandha, chirimwa chesimba rebhiza
Kutanga kwemweya wechitendero
L 'ashwagandha chirimwa chinorodza icho chiri chemhuri yekwaSolanaceae. Ashwagandha ndeimwe yeanonyanya kutarisirwa uye anoshandiswa zvakanyanya ma adaptogens muAyurvedic mushonga. Botanists vanozviti "Withania somnifera", tinozviziva nemazita akajairika, akadai se: Indian ginseng, ashwagandha, Sogade-Beru, nguva yechando Cherry, Asana, Pevette, Ashgandh. Mune mushonga wemakwenzi tinoshandisa midzi yeAshwagandha, mune yeAyurvedic mushonga tinowanzoshandisa mashizha.
MuSanskrit, ashwagandha anoumbwa nezvikamu zviviri: "Ashwa" zvinoreva bhiza uye "Gandha" zvinoreva zvinonhuwirira, saka zita raro rinoreva "ndiani unonhuhwirira bhiza" zvichireva simba raro kupa "simba re bhiza ”. Iro zita rerudzi "somnifera", rinouya kubva muchiLatin, rinoreva "kutakura hope".
2 °) Nhoroondo
Andania somnifera chirimwa chinobva kuIraq neNorth Africa mavambo. inowanikwawo muIndia umo yanga ichishandiswa kwemakore anopfuura zviuru zvitatu. MaArabu ekare aishandisa midzi yemuti se tonic, aphrodisiac uye nekuda kweizvi inebrian madhara (kunzwa kudhakwa).
MuPakistan, mashizha eAnania anoputa, ayo zvakare anounza kunzwa kwechidhakwa. MuYemeni, vagari veko vanoshandisawo Andania midzi seyakaipirwa mazino.
Tei inogona kugadziriswa senge sedative uye inopesana nekunetseka nemidzi yeAnania. kutafuna iyo nyowani midzi yemuti zvakapa tonic athari. MuIndia chirimwa ichi chinonzi chakaenzana nePanax Ginseng (chaiyo Korea Ginseng).
3 °) Nzvimbo
Ashwagandha inowanikwa munzvimbo dzakaoma dzeIndia ne Africa.
4 °) Botanical tsanangudzo.
Ashwagandha chirimwa chine kutaridzika kwe shrub diki uye ichiyera pakati pemakumi matatu nemakumi mashanu neshanu masentimita pakakwirira, inogona kusvika 30 metres.
Ashwagandha chirimwa chegore rose chinoumbwa ne:
oval yakaumbwa mashizha
maruva mumuchero kana mutsvuku
michero yakawanda ye-orange-red
5 °) Kugadzirwa
Aswagandha akapfuma mune simbi, gly magazithanolides (antioxidants), tannins, glue, potasium nitrate, alkaloids uye mafuta acids. Inowanikwawo mukuumbwa kwayo flavonoids, lactones uye acetylsteryl glucosides
Iyo alkaloids yeaswagandha ndeye somnine, somniferin, ineanolides uye anferine. Withanolides anofanirwa kuzvidavirira pakurapwa kwakawanda kweAshwagandha. Ivo vanomutsa activation masero emuviri immune system akadaro lymphocyte. Ivo vanodzivirira kuzvimba uye kunatsiridza ndangariro. Kubatwa pamwe chete, zviitwa izvi zvinotsigira mukurumbira wechinyakare waAshwagandha se tonic kana adaptogen.
6 °) Zvitengo uye kunaka
Ashwagandha ine maitiro ayo anogona kuve maviri tonic uye sedative. Inoshandiswa mune yakakwira dose, ndeye hypnotic. Iyo ine antistress, kana adaptogenic, mhedzisiro nekuvapo kweacetylstérylglucosides iri mukati meidzi.
Iyo inosimudzira kuramba kwemuviri kurwisa uye inomutsa immune system. Iyo ine zvakare antiseptic uye anti-immune zvinhu.
Ashwagandha anonzi anounza chiitiko chinomutsa pakubata kwehuroyi nekuwedzera kugadzirwa kweT4, ihomoni yehoron.
Nhasi, ashwagandha ndeyekurapa kukuru kwekurapa. Chokwadi, zvaizoonekwa zvichienderana nezvimwe zvidzidzo mukufambira mberi kuti ashwagandha ingave nenzvimbo inoderedza kuwedzera kwemasero echitunha.
7 °) Zviratidzo zvokurapa
Wedzera kusadzivirira kumatenda uye kutapukira
Kuwedzerwa hutano, kubereka kwevakadzi uye libido
Batsira kuronga shuga yeropa
8 °) Kupindirana
Ashwagandha inopesana mune vakadzi vane pamuviri uye vanonamatira, uye mune vana vadiki uye mune zviitiko zvehyperthyroidism, nekuda kwechiito chayo paganda re thyroid. Zvakangodaro, chirimwa ichi chakashandiswa zvakachengeteka kwenguva yakareba kwazvo nevana muIndia uye kunyangwe nevakadzi vane pamuviri. Kana ikatorwa padiki kunge tonic. Munguva yekunwisa, inowedzera kuyerera kwemukaka wechipfuva.
10 °) chirwere cheAlzheimer uye Indian ginseng
Vanotsvaga vemuIndia vakawana kuti Indian ginseng (ashwagandha), chirimwa chinoshandiswa mune yechinyakare mishonga yeAyurvedic, inogona kutora chikamu chakakosha muhurongwa hwekurapa kurwisa chirwere cheAlzheimer. Chokwadi, maererano nebasa rakaburitswa muProcessings yeNational Academy yeScience, kubviswa kweichi chirimwa kunogona kudzivirira, mumakonzo, kuumbwa kwemapopu eamyloid muuropi.
ASHWAGANDHA * 400 mg / 60 makapu
1 nyowani kubva ku € 21,00
Tenga 21,00 €
kubvira waChikunguru 10, 2020 7:22 am
ASHWAGANDHA * 400 mg / 60 makapu - * Yakadzika kusvika pa5% muAndanolides
Inonzi "Indian Ginseng" inozivikanwa seIndia panacea
Makapu maviri pazuva anotorwa nehafu yegirazi yemvura, maawa maviri nguva isati yarara.
⭐⭐⭐⭐✰ - Kuvimba nemiririro - 4,2 / 5
Titated Extract - Vegetable Capsules - BPA Mahara - Kwete Irradiated - Lactose Yemahara - Yakagadzirwa muFrance.
Ashwagandha 1000 mg mapiritsi kana mazana matanhatu emapapu makapu - premium yakachena chigadzirwa chechisimba - yechando Cherry, Indian ginseng (600 mapiritsi)
1 nyowani kubva ku € 19,49
Tenga 19,49 €
Unokara kushanda kusagadzikana kana kushushikana kwepfungwa here? Unonetseka kuzorora here kana kuti hauna kunyorwa? Iwe unonetseka nekushaya hope, kushushikana kwemukati, kuomesa pfungwa kana kutotya kutya? Ipapo iwe hausi wega, nekuti zviuru zvevanhu zvinotambura nezviratidzo zvakafanana newe.
Ashwagandha ndewerudzi "Withania somnifera". Iyo yekare Ayurvedic yemakwenzi inoshandiswa muIndia neAfrica kwezviuru zvemakore munhoroondo yechisikigo. Ashwagandha ine simba rakakura uye simba uye chikomborero kune vese vashandisi. Ashwagandha ndeimwe yemakwenzi akakosha muAyurveda uye imwe mishonga yemasikirwo.
Shanda pauri iwe pamwe nemweya wako kuti uve neupenyu hwakanaka. Fungisisa kazhinji uye edza kudzikama. Iwe zvakare unogona kuwana naturopath uyo achakubatsira iwe kuwana chiyero chemuviri, pfungwa uye mweya.
Varume nevakadzi muIndia uye zvikamu zve Africa vanopika neiyo Ashwagandha chirimwa. Ashwagandha inonzi ine inosimudzira, inosimbisa uye inosimbisa mamiriro ekunze. Iwe uchawana yakawanda inobatsira ruzivo nezve Ashwagandha uye mashandisiro ayo paInternet.
USDA inodzorwa uye ISO yakasimbiswa, lactose yemahara, fructose yemahara, gluten yemahara, yakavimbiswa mahara, 100% vegan. Iwe uchawana zvimwe zvakawanda mune tsanangudzo yechigadzirwa.
100% Organic Ashwagandha - Premium KSM 66 Ayurvedic Grass - 500mg Vegan Ashwanghanda Capsules - Indian Ginseng Ine 5% Withanolides - Yakagadzirwa muUnited Kingdom naNutravita
1 nyowani kubva ku € 18,99
Tenga 18,99 €
✔ ASHWAGANDHA, YAKASIMBIKWA NEMAKADZI maviri EUPENYU - Yedu yeAshwaghanda yemakwenzi supplement (Premium KSM 2) ine makumi matanhatu neshanu (66) makapu pane kubatira (60 mg).
ORGANIC HERBAL SUPPLEMENT - Ashwanghanda (inozivikanwa zvakare seAshwaghanda, Ashwagandha, Indian Ginseng kana naAndania Somnifera) imwe yemakwenzi akakosha eAyurveda, imwe nzira yekurapa neimwe nzira.
NZVENYAYA DZESVONDO - Dzemahara: gluten, gorosi, mukaka, soy, sodium, zvinonhuwirira flavour, zvinotapira uye zvinogadziriswa. Inokodzera kune vanyowani uye vegans. Kuve wakasimbiswa organic neiyo Soil Association zvakare inovimbisa chigadzirwa pasina mishonga yekuuraya zvipuka kana makemikari, 100% zvakasikwa kune muviri wako uye nharaunda.
NUTRAVITA yakazvipira kukupa iwe yakachena uye yepamusoro mhando zvigadzirwa zvinogoneka. Isu takazvipira kukubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako nekuona kuti une zvese zvaunoda kuti iwe ufare uye uve nehutano hwakanaka!
CHII CHINONZI CHINANGWA CHENUTRAVITA? - Nutravita bhizinesi remhuri rakavambwa muUnited Kingdom muna 2014 - kubvira ipapo tave inozivikanwa uye inozivikanwa chiratidzo mumunda, tave inozivikanwa uye inozivikanwa mhando yevhitamini uye zvinowedzera nevatengi vedu pasi rese. . Zvigadzirwa zvedu ndezvemhando yepamusoro - zvese zvatinoita tinogadzirwa uye zvakasimbiswa muUK uye zvinoenderana nemitemo yakasimba kwazvo yekugadzira munyika (GMP, BCR).
Ichi chirimwa cheAfrica chinogona kurapa Alzheimer's, Parkinson's kana stroke
Simba Rekufunga Kwakanaka - Norman Vincent Peale (Audio)